यी हुन् कतार कामदार पठाउने टप कम्पनीहरु, ९ कम्पनीले मात्र हजार बढी कामदार पठाए - Mountain Media
काठमाडौं : खाडी मुलुक कतार माकामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरु गत वर्ष धेरै कामदार पठाउने सूचीको अग्रस्थानमा देखिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रगति विवरण अनुसार गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा पठाएकामध्ये कतारमा कामदार पठाउने कम्पनीहरु अग्रस्थानमा देखिएका हुन् ।
सूचीको चौथो नम्बरमा रहेको प्याराडाईज इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले ३ सय ४ जना महिलासहित १ हजार ४ सय ४५ जना कामदार पठाएको छ । पाँचौं नम्बरमा रहेको एसओएस म्यानपावर सर्भिसेस प्रा.लि.ले १ हजार ४ सय २९ जना कामदार पठाएको छ । सूचीको छैठौं नम्बरमा रहेको भिजन एण्ड भ्यालु ओभरसीज प्रा.लि.ले १ हजार ३ सय ५५ जना कामदार पठाएको छ । सातौं नम्बरमा रहेको दि रिभर ओभरसीज प्रा.लि.ले २ सय ७४ महिलासहित १ हजार ३ सय १० जना कामदार पठाएको छ । आठौं नम्बरमा रहेको अक्सफोर्ड इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले १ हजार २ सय ३३ जना कामदार पठाएको छ ।
सोह्रौ नम्बरमा रहेको ट्यालेन्ट ओभरसीज सर्भिसले ५ सय ६९ जना कामदार पठाएको छ । सत्रौं नम्बरमा रहेको अल जारफा ह्युमन रिसोर्स कन्सल्टयान्सीले ५ सय ३० जना कामदार पठाएको छ । अठारौं नम्बरमा रहेको बेस्ट रिक्रुटमेन्ट सर्भिसले ५सय २६ जना कामदार पठाएको छ । उन्नाइसौं नम्बरमा रहेको वाहा म्यानपावर सप्लायर्स प्रा.लि.ले ५ सय २० जना कामदार पठाएको छ । सूचीको बिसौं नम्बरमा रहेको नाइस रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी प्रा.लि.ले ४ सय ४ जना कामदार पठाएको छ ।
गत वर्ष राजधानीको बत्तिसपुतलीस्थित दि रिभर ओभरसीज प्रा.लि., धापासीस्थित एसओएस म्यानपावर सर्भिसेज प्रा.लि., ललितपुरको बखुण्डोलस्थित प्याराडाइज इन्टरनेशनल प्रा.लि., सामाखुशी टाउन प्लानिङस्थित भिजन एण्ड भ्यालु ओभरसीज प्रा.लि, सामाखुशीस्थित अञ्जली ओभरसीज सर्भिस प्रा.लि., सान नेपाल प्रा.लि., नोकरी नेपाल रिक्रुटमेन्ट सर्भिस प्रा.लि., साउण्डलाइन रिक्रुटमेन्ट प्रा.लि., अक्सफोर्ड इन्टरनेशनल प्रा.लि र स्वीफ्ट गोर्खा इन्टरनेशनल प्रा.लि. पहिलोदेखि क्रमशः दशौं स्थानमा रहेका थिए ।
Previous: किन टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकलाई कर्मचारीले आफ्नै कार्यकक्षमा रातभर थुने ?
Next: परिवारै मिलेर मारेको हो , मर्नुअघि देवरले भाउजूको गोप्य अङ्गमा छुने गर्थें भन्दै बैनि र दाजु मिडियामा, माइतबाट घर गएको ३ घन्टामा आत्महत्या गरेको खबर आयो , के हो घटना ?